‘Rava avokoa ny zavatra rehetra’ : Tatitra an-tsary ny faharavàna ao amin’ny tanànan’i Marawi ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Taona roa taorian'ny fahirano, fa mbola rotika foana ny tanàna
Voadika ny 09 Jona 2019 11:06 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Italiano, Ελληνικά, polski, English
Saripika an'i Arlene Brosas, solombavambaka avy amin'ny Antokon'ny Vehivavy Gabriela. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Taona roa taty aorian'ny fahirano nahazo an'i Marawi, ny May 2015 hatramin'ny Oktobra 2017, tsy tafarina avy amin'ny faharavàna ny ampahany goavana tamin'ity tanàna iray ity, izay silamo no betsaka amin'ny mponina ao aminy, ao amin'ny nosy Mindanao any atsimon'i Filipina, ary mbola mitazona ny satan'ny olona nafindra toerana hatrany ireo vahoaka an'arivony maro ao.
Arlene Brosas, solombavambahoaka avy amin'ny antokon'ny vehivavy – Gabriela Women’s Party [FnM:GABRIELA nalaina avy amin'ny hoe ‘General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action’] izay solontena ao amin'ny Kaongresy Filipiàna ho an'ireo vehivavy atao anjorom-bàla, dia nametraka ho anaty tambajotra ireo saripika nandritra ny fitsidihana nataony tao Marawi tamin'ny 21 Martsa 2019, anaty lahatsoratra iray azon'ny rehetra jerena ao amin'ny Facebook. Hoy izy manamarika :
Na teo aza ny halehiben'ny faharavàna, azo ambara ho tsy mbola nisy fanesorana natao na kely aza. Trano fonenana sy trano fiasàna goavana, kianja, eglizy sy maoske, voadaroka baomba: rava avokoa ny zavatra rehetra. Tsy misy ifandraisany intsony amin'ilay maha-maresaka sy maha-manankarena an'ilay faritra talohan'ny fahirano.
Ady mafy an-tanandehibe naharitra dimy volana fotsiny no namafàna an'i Marawi, daroka baomba nataon'ny tafondro mavesatra sy ireo fanafihana an'habakabaka nataon'ny tafi-panjakana izay niezaka nandemy ny vondrona iray mpanao an-tendrony Moro nibodo ilay tanàna sy nanao valim-panafihana rehefa niezaka ny hisambotra ireo lehibeny ny tafika.
Ny fanafihana an'i Marawi nataon'ny vondrona djihadista Maute dia nampisaina hanamarinana ny fametrahan'i Duterte ny lalàna miaramila nanerana ny nosy Mindanao mba hamerenana amin'ny laoniny ny filaminambahoaka sy hiantohana ny firosoana. Taona roa aty aoriana, mbola miandry mandrakariva izay hiverenany any aminy ireo mponina tao Marawi mba hamerina hanorina indray ny fiainan-dry zareo.
Nanery olona maherin'ny 100.000 handositra ny toerana nonenany sy tsy hianjadian'ny ady ilay fahirano nataon'ny tafika filipiàna. Omen'ny tatitra iray avy amin'ny Firenena Mikambana fa maherin'ny 66.000 amin'izy ireny no mbola mijanona ho olona nafindra toerana any anatin'ireo toby fialofana na any amin'ny havany any amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena.
Silamo efa hatry ny elabe ny ankamaroan'ny mponina ao Mindanao. Efa taompolo maro ireo silamo mitaky ny fizakantenany ao Mindanao no nitolona, ary mankahàtra ny governemanta filipiana amin'ny fandraisany fiadiana mihitsy ny vondrona sasany. Hatreto, misy ireo fifanarahana fandriampahalemana nahavita naka ny fon'ireo vondrona lehibe sasany amin'ireo mpikomy mba hiasàna ho amin'ny fametrahana fehizoron'ny fizakantena. Saingy ireo vondrona sasany toy ny Maute dia manohy manao tsindry mba hisian'ny Fanjakana iray Islamika tsy miankina.
Nandritra sy taorian'ny fahirano, tena vaofetra ny fidirana nankao Marawi. Vondrona media vitsivitsy monja, ireo tomponandraikitra sivily ao an-toerana sy ireo mponina voasivana no afaka nahazo alàlana miditra ao an-tanàna. Ireto saripika manaraka ireto dia manome topimaso tsy fahita firy amin'ny halehiben'ny faharavàna ao an-tanàna, ny hirifiry sy fijaliana zakain'ny mponina ary ny fahasahiranana goavana atrehina amn'ny fanarenana.
Ny toedraharaha iainan'ireo olona nafindra toerana.
Ny fitsidihana nataon-dRtoa Brosas amin'ny maha-solombavambahoaka azy dia nanamafy ireo vaovao tany aloha momba ny toedraharaha ratsy iainan'ireo mponina any amin'ireo toby fialofana. Hoy Rtoa Brosas manoratra:
Afaka nanopy maso an'ireo tobin'ny mpialokaloka aho. Tena henjana ny toedraharaha iainan-dry zareo. Taona roa aty aoriana. efa simba sahady ireo tranolay efa antitra. sy hoe rovitra misy lavaka fotsiny izy ireny, fa tena mafàna tsy laitra ao anatiny ao. Ratsy dia ratsy ny zavatra iainan'ireo fianakaviana sy ny ankizy. Tsy misy rano ary tsy maintsy mandeha lavitra mba hantsaka. Toa misy resaka aza fa hiato tanteraka ny fitsinjaràna rano. Tsy misy herinaratra. Misy ireo namantsika nanampy tamin'ny fametrahana takelaka fakàna angovo amin'ny masoandro mba hisian'ny fahazavàna kely.
Ny faritra afovoany fanaovana fandraharahàna – antsoina hoe “ny teboka aotra” – no faritra tena rava indrindra ao Marawi. Tsy mbola nisy nahazo alàlana hahazo miverina any amin'ny toerana nonenany ireo mponina tao, izay izy ireo ihany no ho soavaly hiantoka vilona amin'ny asa fanarenana hoy ny Filoha Rodrigo Duterte.
Nolavin‘ny governemantan'i Duterte ireo fiampangàna azy ho tsy nihetsika, raha ilay vondrona Bangon Marawi nomena andraikitra hanao ny asa fanarenana kosa manamafy fa ny fahataràna hitan'ny rehetra dia vokatry ny pitsopitsony samihafa ara-teknika tafiditra amin'ireo hetsika fanesorana ny fatin-korontana sy ny fifampiresahana amin'ny mponina.
Ireto koa misy saripika avy aminìireo toby fialofana ao Marawi :